[Review] Top 8 keo dán mi tốt và an toàn nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 8 keo dán mi tốt và an toàn nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ngezinsuku zezimonyo zamaphathi, ama-picnics noma imicimbi, abesifazane bavame ukudinga ukusekelwa kwe-eyelashes yamanga ukuze benze ama-accents ukuze amehlo abo abe mahle futhi athandeke. Kodwa udidekile ukuthola uhlobo i-eyelash glue enhle ukunamathisela imivimbo enkopheni. Ngakho-ke, sicela ufunde ngokushesha ulwazi olulandelayo ukuze uthole kalula umkhiqizo wekhwalithi othenjwa kakhulu namuhla.
1 Iyini i-eyelash glue?
2 Ukusetshenziswa kwe-eyelash glue
3 Indlela yokukhetha i-eyelash glue efanele
4 Top 8 ethandwa kakhulu elash glue namuhla
4.1 4.1 I-Duo Striplash Adhesive
4.2 4.2 I-Vacosi Natural Studio Eyelash 3D Primer
4.3 4.3 Isinamathiselo Esimnyama sika-Andrea Semivimbo Yemivimbo
4.4 4.4 I-Basidai Glue
4.5 4.5 Iglue Eye Cream Marie
4.6 4.6 I-Missha Secret Lash Black Glue
4.7 4.7 Odbo Eyelash Glue OD8130
4.8 4.8 I-Mee Aloe Vera Entsha Enamathela Kwezinkophe i-Mira Cosmetics
Iyini i-eyelash glue?
I-eyelash glue umkhiqizo weglue osetshenziswa lapho usebenzisa i-eyelashes yamanga, kubhekwa njengethuluzi elibalulekile nelidingekayo lokufaka isandla ekuphumeleleni kobuciko bokwenza amehlo abukhali. Umkhiqizo uthathwa njengento engenakuhlukaniswa emhlabeni wezimonyo, onikela ekudaleni imisebenzi yobuciko eheha wonke amehlo nxazonke.
Ukusetshenziswa kwe-eyelash glue
Umugqa womkhiqizo we-eyelash glue uhlala uletha izinzuzo ezinkulu emehlweni akhe nemivimbo. Okokuqala, ikhono lokunamathela ngokuqinile eyelashes yamanga enkophelweni iletha ubuhle obuphelele emehlweni akho nokuvumelana nobuso bakho.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye ube namandla okuvuselela ama-eyelashes, ukugcina ama-eyelashes aqinile futhi acwebezelayo. Ngakho-ke uvikeleke ngokuphelele lapho efaka izimonyo ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi ama-eyelashes wangempela aphukile noma abe buthaka futhi alimale.
Indlela yokukhetha i-eyelash glue efanele
Uma ufuna ukuba ne-eyelash glue enhle, ungaphuthelwa amanothi alandelayo.
Ukunamathela: Khetha umugqa weglue ngokunamathela okuphezulu, udale umuzwa omnene wamehlo.
Iziqu ezingangeni manzi: Lokhu kungenye yezinto ezisiza ama-eyelashes amanga ukuthi angaqedi lapho i-clone iba manzi.
Isithako: qiniseka ukuthi i-glue ayikhethayo iqukethe izithako eziphephile, ayibangeli ukucasuka, ukuzwela esikhumbeni namehlo.
Imibandela yokukhetha i-eyelash glue efanele
Uma ususa izimonyo:Inqubo yokususa izimonyo ezinamathelayo kufanele ibe mnene futhi ibe lula ukuze ingalimazi isikhumba esibucayi.
Uphawu lokuhweba: Thenga imikhiqizo ezinkampanini ezinedumela elihle, gwema izimpahla ezintantayo zemvelaphi engaziwa.
Inani: Cabangela imikhiqizo efanelekile ethengekayo ekutshaleni kwakho imali futhi ilethe imiphumela emihle yemivimbo yakho kanye nesikhumba sakho.
Top 8 ethandwa kakhulu elash glue namuhla
Isibuyekezo esinemininingwane Izinhlobo ezingu-8 ze-eyelash glue yamanga Nazi ezinye iziphakamiso zokuthi ukhethe izitayela zezimonyo ezihamba phambili nezifaneleka kakhulu.
4.1 I-Duo Striplash Adhesive
I-Striplash Adhesive yomkhiqizo we-Duo eyenziwe e-USA ngokunamathela okuphezulu, esetshenziswa inqubo yokunamathisela izinkophe ezingamanga. Umkhiqizo ukhishwa ezingxenyeni eziphephile ukuze udale ama-eyelashes amahle ngaphandle kokucasula isikhumba esibucayi.
Umkhiqizo uyathandwa futhi wethenjwa abaculi bezimonyo. Ingcina emhlophe yobisi uma isetshenziswa kuyo izobonakala, ingadali amajwabu amehlo abesifazane. Idizayini yebhulashi elincane, ikhanda lebhulashi elihlangene lenza kube lula kuye ukuthi athole inani elanele leglue ngenqubo yokunamathisela izinkophe ezingamanga.
Ukuqina nokuqiniseka komugqa weglue we-Duo kuphezulu, kodwa lapho ususa izimonyo, futhi kulula kakhulu futhi kumnene, ngaphandle kokudala umonakalo endaweni ezungeze amehlo. Ingcina ethambile, enamathelayo, nekwazi ukumelana namanzi ayibangeli izigaxa noma izigaxa futhi iyamsiza ukuthi azethembe ngokwengeziwe lapho esebenza ngaphandle kokwesaba ukulahlekelwa izinkophe zamanga ezibukhali.
Ngaphezu kwalokho, uyamangala ngempela ngejubane lokumisa ngokushesha leglue elibhekwa njengomkhiqizo kazwelonke ofanele zonke izinhlobo ze-eyelashes. Ngaphandle kwalokho, ithoni eyinhloko yangaphandle yebhodlela yeglue iluhlaza, ebamba amehlo amantombazane kusukela ngesikhathi sokuqala. Intengo yamanje yokuthengisa ye-Duo Striplash Adhesive ingu-170,000 VND/ 5g ibhodlela.
4.2 I-Vacosi Natural Studio Eyelash 3D Primer
I-Natural Eyelash 3D Primer kanye neglue eliwugqinsi kuzokujabulisa kakhulu emcimbini ogcwele abantu, ngakho-ke izinkophe ezingamanga zenziwa ukuze zihlangabezane naleso sidingo. Umugqa waseKorea we-Vacosi eyelash glue uzoba yindlela ephumelela kakhulu yokukusiza ukuthi unamathisele kalula ama-eyelashes angamanga emehlweni akho.
Ukuqina nokunamathela komkhiqizo kuphezulu, ngakho-ke isibopho se-eyelashes yamanga namehlo sizokwakhiwa ngendlela evikelekile kakhulu. Ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha obuthuthuke kakhulu ekukhiqizeni i-Natural Eyelash eyelash glue kuletha izinzuzo ezivelele uma kuqhathaniswa neminye imigqa yeglue eminingi emakethe.
Ikhanda lebhulashi lenzelwe ngokwehlukana, lihlangene ukuze likusize usebenzise kalula iglue eyelashes ngaphandle kokwesaba ukugcoba esihlokweni se-eyelashes. Iglue ethambile esobala, ukunamathela okuphezulu kwenza kube lula ukusetshenziswa kwabesifazane, ngisho namantombazane angawazi izimonyo.
Ikakhulukazi ngezithako ezinomsoco eziphezulu, uma zisetshenziselwa injongo eyinhloko, umkhiqizo nawo unomphumela ophumelelayo wokondla ama-eyelashes akho wangempela. Uqinisekisiwe ngokuphelele ukusebenzisa nokuvala isivalo ngemva kokunamathisela, ngokuqinisekile leli bhodlela leglue le-eyelash elingu-8ml lizoba nesikhathi eside sokulisebenzisa.
Idizayini yebhodlela leglue elilula elinamathoni angu-2 okumnyama nokumhlophe kuletha ubuhle nobunkimbinkimbi ebhodleleni leVacosi. I-65,000 VND iyinani eliyireferensi elithengiswa ezitolo eziningi ezinedumela elihle namuhla.
4.3 Isinamathiselo Esimnyama sika-Andrea Semivimbo Yemivimbo
Amantombazane asebenzisa njalo ama-eyelashes amanga, i-Andrea Dark Adhesive glue izoba umsizi ophumelelayo wokudala isibopho esiqinile se-eyelashes yamanga. Kwenziwe e-USA, umkhiqizo uhlala uqiniseka ukuthi uqinisekise ikhwalithi nokuphepha kwabasebenzisi.
Iglue iwugqinsi kodwa yoma ngokushesha futhi ingabangeli ukunamathela okungajabulisi emivimbolweni. Ishubhu kakhilimu linomklamo ohlangene okulula ukuthi uwuthwale futhi ulungele zonke izinhlobo zesikhumba. Ngaleyo ndlela ikusiza ukuthi udale ngokushesha amehlo amahle aheha amehlo amaningi. Intengo yokuthengisa ye-1 tube ye-7g ingu-60,000 VND.
4.4 I-Basidai Glue
I-Basidai eyelash glue iwumugqa womkhiqizo ovela e-Japan, onomklamo odonsa amehlo futhi wagqanyiswa yisivalo segolide-egolide esihlanganiswe nethoni ekhanyayo emzimbeni ukuze ilethe ubuhle kumsebenzisi. Ukhilimu osobala, owomisa ngokushesha ongabangeli ukunqwabelana noma ukunamathela emivimbo yakho.
Izithako zenziwe ngezithako zemvelo, ezihlinzeka ngokuphepha okuphezulu, ezifanele zonke izinhlobo ze-eyelashes zamanga futhi azibangeli ukucasuka kwesikhumba uma zisetshenziswa. Ukumelana namanzi ngokuphelele, umkhiqizo unamandla okudala isibopho esiqinile samehlo.
Kulula ukuyisebenzisa, ibhulashi elincane, elithambile leglue kulula ukulisebenzisa, likusiza ukuba ube neso elihle, elicwazimulayo, elibukekayo ekhaya. Intengo yobungane yeglue ye-Basidai yi-58,000 VND.
4.5 Iglue Eye Cream Marie
Njengamanje, umugqa womkhiqizo we-Eye Cream glue usuba yimfashini emhlabeni wobuhle. Ngoba ihlinzeka ngomphumela we-2in1 kwabesifazane, ngaphezu komthelela wezinkophe zamanga ezinamathelayo, umkhiqizo unamandla okuguqula ijwabu leso eli-1 libe amehlo amakhulu amahle anamajwabu amehlo angu-2 ngaphezulu.
Idizayini yokupakisha idonsa amehlo, isihlukanisi seglue sinekepisi elipinki lengane elihle futhi umzimba wesivalo uxutshwe nombala oyinhloko wokumhlophe okubisi kuya ebuhleni obuheha wonke amehlo. I-eyelash glue inokwakheka kwejeli emhlophe, yoma ngokushesha ngemva kwemizuzwana engu-10 yokushanela eyelashes amanga, ukunamathela okuphezulu usuku lonke.
Ngaphezu kwebhulashi leglue elinomklamo omncane, lo mkhiqizo futhi uza nethuluzi lokucindezela i-eyelash lamehlo amahle kakhulu. Khipha kalula izimonyo ngamanzi afudumele ngaphandle kokubangela ubuhlungu noma ukuphuka kwezinkophe. I-41,000 VND iyintengo yesithenjwa emakethe namuhla.
4.6 I-Missha Secret Lash Black Glue
I-Secret Lash Black Glue isandiso se-elash kanye nomkhiqizo we-eyelash womkhiqizo ohlonishwayo i-Missaha e-Korea, ethenjwa abesifazane abaningi. Umkhiqizo uzodala umphumela wamehlo akho amakhulu futhi ayindilinga, akhangayo ngaphandle kokucasula isikhumba esibucayi eduze kwamehlo.
Ibhulashi likakhilimu lincane kakhulu, lincane futhi lisebenziseka kalula, ungasebenzisa izimonyo ekhaya ukuze ube nezinkophe eziqinile, umsize akhanye ngokuzethemba ngaphandle kokwesaba ukulahlekelwa izinkophe ezingamanga usuku lonke. . Ukumelana kahle namanzi, akukhukhuleki lapho uthinta amanzi ngephutha noma umzimba wakho ujuluka kakhulu ebusweni, kodwa ukukhishwa kwezimonyo zalo mugqa wokunamathisela kuthambile kuneminye imikhiqizo eminingi.
I-Missha glue izonikela ekukunikezeni ukubukeka okusha okuhle nokuphelele. Intengo inengqondo engu-90,000 VND ibhodlela le-2in1 eyelash glue.
4.7 Odbo Eyelash Glue OD8130
Umugqa womkhiqizo obalulekile ohlelweni lokusebenzisa izinkophe zamanga zamehlo amahle awukwazi ukuhluleka ukukhuluma ngeglue yamehlo eyenziwe eThailand I-Odbo Eyelash Glue OD8130. Ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha, lo mugqa weglue we-OD8130 unokunamathela okuphezulu, kulula ukususa ama-eyelashes angamanga ngaphandle kokulimaza isikhumba esibucayi kanye namehlo akho.
Ngaphezu kwalokho, ikhono eliphelele lokuvimbela amanzi, ngakho-ke lapho uhlangabezana nemvula noma amanzi, akudingeki ukhathazeke ngokuthi ama-eyelashes angamanga awela phansi, kodwa uzoqiniseka ngokuphelele uma usebenzisa isikhiphi se-makeup ukuze ususe izimonyo ebusweni bakho. Izithako zilungile, ziphephile, futhi azimcasuli umsebenzisi.
Ishubhu kakhilimu inemibala emi-2 emhlophe nemnyama ukuze ukhethe umbala owuthandayo. Ngaphandle kwalokho, ukuklanywa komkhiqizo nakho kuhlangene, okwenza kube lula kuye ukuhambahamba, ukubamba iqhaza ezenzakalweni eziningi ezinkulu ngaphandle kokuthatha indawo enkulu ezikhwameni zezimonyo zabesifazane. Njengamanje, iglue ye-Odbo Eyelash Glue OD8130 ithengiswa nge-30,000 VND.
4.8 I-Mee Aloe Vera Entsha Enamathela Kwezinkophe i-Mira Cosmetics
I-New Mee Aloe Vera Mira Cosmetics iqukethe izithako ezikhishwe kunhlaba ezingenabungozi futhi eziphephile esikhumbeni sakho. Imikhiqizo yomkhiqizo we-Mira Cosmetics inejeli elilula, elinganamatheli kanye nokunakekelwa okuhle kwezinkophe.
Umklamo omncane wekhanda lebhulashi kulula ukusebenzisa i-glue kuma-eyelashes angamanga ngaphandle kokwesaba ukugcoba emzimbeni kanye nesihloko se-eyelashes. Ikhono lokubopha leglue liphezulu, lisiza ukunamathela eyelashes yamanga emehlweni amahora amaningi ngaphandle kokwesaba ukuwa lapho ehlanganyela emisebenzini, ukumsiza ukuba aqiniseke ngokwengeziwe lapho esebenzisa ama-eyelashes amanga.
I-glue ihlala isikhathi eside, okwenza kube lula ukulungisa kabusha isitayela lapho usebenzisa i-eyelashes. Intengo yalo mugqa weglue yi-65,000 VND ngebhodlela le-12ml.
Ngalesi sihloko, ngikunikeze zonke izinhlobo ze ingcina ye-eyelash yamanga enhle futhi esetshenziswa kakhulu namuhla. Uma ufuna ukuba namehlo amahle futhi akhangayo ngesikhathi sokwenza imicimbi emikhulu, kufanele usebenzise umkhiqizo omuhle futhi ophephile we-eyelash glue ofaneleka kakhulu kuwe.